शिर्ष मध्ये कतिपय नेताहरुले कहाँ-कहाँबाट मतदान गर्दैछन् त ?
काठमाडौं : प्रतिनिधिसभा तथा प्रदेशसभाको भोलि हुने निर्वाचनमा शिर्ष नेताहरु उम्मेद्वार नै बनेका छन् । मतदाता नामावली भएका क्षेत्र भन्दा फरक क्षेत्रमा उम्मेद्वार बनेका नेताहरुले मतदान गर्ने नपाउंने अवस्था छ भने शिर्ष मध्ये कतिपय नेताहरुले कहाँ कहाँ मतदान गर्दैछन् त ?
प्रधानमन्त्री एवं नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले डडेल्धुरामा मत खसाल्ने छन् । डडेल्धुरामा नेपाली कांग्रेसका प्रतिनिधिसभाका प्रत्यक्ष उम्मेद्वार रहेका देउवाले गन्यापधुरा गाउँपालिका १ स्थित असिग्राम उच्चमाध्यामिक विद्यालयमा मतदान गर्दैछन् ।
झापा ५ मा बाम गठबन्धनका प्रतिनिधिसभामा प्रत्यक्ष उम्मेद्वार एमालेका अध्यक्ष केपी ओलीले आफैलाई मत दिन पाउंने छैनन् । भक्तपुर सुर्यविनायक नगरपालिकाको २ नम्बर वडामा नाम भएका ओलीले झापामा रहनुपर्ने भएकोले आफैलाई मत दिन पाउंने छैनन् ।
ओली मात्रै होइन झापा १ का बाम गठबन्धनमा प्रतिनिधिसभा तर्फ प्रत्यक्ष उम्मेद्वार राम कार्कीले पनि आफैलाई मत दिन पाउंने छैनन् । काठमाडौमा मतदाता नामावलीमा नाम भएको र उम्मेद्वार झापामा भएको कारणले पनि कार्कीले काठमाडौमा मत दिन नभ्याउंने बताएका छन् ।
बाम गठबन्धनबाटै उम्मेद्वार बनेका माधवकुमार नेपालको नाम रौतहटमा रहेको र काठमाडौ क्षेत्र नम्बर २ मा प्रतिनिधिसभामा उम्मेद्वार भएकोले पनि मत दिन पाउंनेछैनन् भने कृष्णबहादुर महरा झक्कुप्रसाद सुवेदी डाक्टर आरजु राणा देउवाले आफैलाई मत दिन पाउंने छैनन् ।
रोल्पामा मतदाता नामावलीमा नाम रहेका महरा र सुवेदीमध्ये महरा दाङमा उम्मेद्वार बनेका छन् भने सुवेदी काठमाडौ क्षेत्र नम्बर ६ मा उम्मेद्वार बनेका छन् । डडेल्धुरामा मतदाता नामावलीमा नाम रहेकी श्रीमती देउवा कैलाली क्षेत्र नम्बर ५ मा उम्मेद्वार बनेकी छन् । यसअघि पहिलो चरणको निर्वाचनमा रुकुममा प्रतिनिधिसभाका उम्मेद्वार बनेका जनार्दन शर्मा र वर्षमान पुनले आफ्नो लागि पहिलो पटक मत दिएका थिए ।
यसैगरी विहिबारको निर्वाचनमा नेपाली कांग्रेसका नेता कृष्णप्रसाद सिटौलाले झापाको भद्रपुर नगरपालिकाको कलवलगुडी १० मा मतदान गर्नेछन् भने कांग्रेसकै नेताहरु खुमबहादुर खड्काले दाङमा, दिलेन्द्रप्रसाद बडुले दार्चुलामा रामचन्द्र पौडेलले तनहुं, गोपालमान श्रेष्ठले स्याङ्जा, प्रकाशमान सिंहले काठमाडौ, शशांक कोइरालाले काठमाडौमै मतदान गर्दैछन् ।
नेकपा एमालेका नेता झलनाथ खनालले सुर्योदय नगरपालिकामा उपाध्यक्षहरू वामदेव गौमतले बर्दिया बाँसगढी ८ स्थित त्रिभुवन उच्च माविमा मतदान गर्दैछन् भने भीम रावलले अछामको साँफेबगर नगरपालिका- ६ स्थित चन्द्रोदय आधारभूत विद्यालयमा मतदान गर्दैछन् । एमाले संसदीय दलका उपनेता सुवासचन्द्र नेम्वाङले इलाम नगरपालिकामा र नेता विष्णु पौडेलले बुटवल उपमहानगरपालिकामा मतदान गर्दैछन् ।